मंगलबार बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ? - सिम्रिक खबर
मंगलबार बढ्यो सुनको भाउ, तोलाको कति ?
२० असोज, काठमाडौं। साताको कारोबारको तेस्रो दिन आज सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार ४ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य मंगलबार ८ सय रुपैयाले बढेको हो । यो सँगै आज सुनको मूल्य ९४ हजार ९ सय तोकिएको छ । सोमबार सुनको मूल्य ९४ हजार १ सय रुपैया तोकिएको थियो ।
आइतवार सुनको मूल्य २०० ले बढ्दै ९४ हजार ५०० रूपैयाँ पुगेको थियो। यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ९४ हजार ४ सय रुपैया तोकिएको छ भने हिजो ९३ हजार ६०० कायम भएका थियो । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । हिजो तोलामा एक हजार १८० रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज १२ सय रुपैया तोकिएको छ ।